Dhaqaatiirta isbitaalka banaadir oo ka dayrisay caruur qabta cudurka kansarka
Home Health Dhaqaatiirta isbitaalka banaadir oo ka dayrisay caruur qabta cudurka kansarka
Deeq loo qaybinaayo dad tabaaleysan
Labadii bilood ee lasoo dhaafay ayaa Isbitaalka Banaadir ee magaalada Muqdisho waxa uu diiwaan galiyay ilaa 20 Caruur ah oo qaba nuucyada kala duwan ee Xanuunka Kansarka.
Dhaqaatiirta Isbitaalka ayaa ayaa sheegtay in Caruurtaasi oo gobolo kala duwan oo Soomaaliya kamid ah laga kala keenay aysan Xaaladooda waxbo uga qaban Karin gudaha dalka, waxayna codsi ujeediyeen cidii gacan ka gaysan karta u gargaarida caruurtaasi.
Dr. Yaxye C/qaadir Shuucle, oo ah madaxa dhaqaatiirta Caruurta ee Isbitaalka Banaadir oo warbaahinta wareeysi siinayay ayaa sheegay in ay tirakoob ay sameeyeen ay ku ogaadeen in Sanadkii lasoo dhaafay ilaa hada ay diiwaan galiyeen ilaa Caruur gaareeysa 20, kuwaasoo qaba xanuunka Kansarka.
Dhaqtarka ayaa waxa uu sheegay in Caruurtaas qabta Cudurka Kansarka ay isugu jiraan laba qaybood oo kala ah, Kansarka dhiiga ku dhaca iyo kan ku dhaca dhamaan qaybaha Jirka, waxaa kaluu sheegay in baaritaano badan ay sameeyeen ay ku ogaadeen in Caruurtan ay qabaan Xanuunka Kansarka.
Dhaqtarka, ayaa sidoo kale qeexay in iyaga aysan waxbo ka qaban Karin Xanuunada Caruurtaan, laakiin waxa uu xusay in ay jiraan hay’ado garab kasiiya, waxa uu sheegay in ay mar mar u yimaadaan dhaqaatiir kasocota Turkiga kuwaasoo kaalmo ufidiya dadka qaar ee ay iyaga wax uqaban waayeen.
Isbitaalka Hooyada iyo Dhalaanka ee Banaadir ayaa guud ahaan waxa uu qaabilaa Caruur qabta Xanuuno kala duwan haba ugu badnaadeen kuwa nafaqa darada hayso iyo Shubanka.
Hawlgal ciidamada dowladda Federalka Somaliya ay ku qaadeen 19-kii Bishan deegaanka...